Samadhan News बिपीको विचारलाई अंगाल्न नसकेको कांग्रेस – SAMADHAN NEWS
सोमबार, ०५ असोज २०७७
बिपीको विचारलाई अंगाल्न नसकेको कांग्रेस
‘यो न पञ्चायत हो न प्रजातन्त्र हो । यो ‘करप्सन’ र ‘डिक्टेटरसिप’ को अर्को नाम हो । ‘डिक्टेरसिप’ भनौं भने यो राजालाई पनि फाइदा छैन । मैले यो कुरा पनि राजासँग भनें । यो सरकारको निहीत स्वार्थको कुरा हो, यो व्यवस्था राख्ने भन्ने कुरा । सरकारले यसलाई टेवा दिएर अड्याइरहेको छ ।’ ४० वर्ष अघि बेलायत गएका बेला बिपी कोइरालाले बिबिसी नेपाली सेवाका लागि दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए ।
जुन अन्तर्वार्ता प्रशारण भने हुन पाएन । कुनै खालको सिद्धान्त अबलम्बन गर्न नसकेको पञ्चायती शासन व्यवस्था ढाल्नका लागि थुप्रै प्रयास भए । बिपीकै पालामा सम्भव नभए पनि प्रजातान्त्र पुनस्र्थापना भइछाड्यो । सार्वभौमसत्ता नेपाली नागरिकमा निहीत हुने गरी संविधान बन्यो ।
त्यसपछि पनि रमुलुकमा धेरैथरि परिवर्तन भए । २ सय ४० वर्ष पुरानो राजतन्त्र पनि ढल्यो । त्यतिमात्र होइन संघीयता कार्यान्वयनमा आइक्यो । तर के बिपीले सोचेको जस्तो समाज अनि मुलुक बन्यो त ? कि उनले त्यतिबेलै ‘यो न पञ्चायत हो न प्रजातन्त्र हो’ भनेजस्तो हामी शासकीय शैलीमा अल्झिएका त छैनौं भन्ने अनुभूति जनस्तरबाट हुन थालेको छ ।
नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गरेका बिपी कोइराला २०१५ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा २ तिहाई मतका साथ प्रधानमन्त्री बने । राजा महेन्द्रसँगको टकरावका कारण उनी धेरै समय सत्तामा टिक्न सकेनन् । तर बिपीका सिद्धान्त र विचार सर्बकालीन बने । कांग्रेसजनका लागि मात्रै होइन हरेक पार्टीका हरेक तहतप्काका व्यक्ति उनका विचारबाट प्रभावित छन् । राणा परिवारमात्र होइन नेपालको राजाहरुसँगको सम्बन्ध कहिल्यै सुमधुर हुन सकेन । त्यसमा बिपीको राजनीतिक एकाग्रता बढी जिम्मेवार थियो । जनताका अधिकार स्थापित गर्न उनी कसैसँग सम्झौता गर्न चाहेनन् । जनतालाई साथमै लिएर मुलुकमा समाजवाद स्थापनाका लागि निरन्तर लागिरहे ।
मेलमिलापको नीतिका नाममा राजा महेन्द्रसँग घाँटी जोड्न आएको भनेर उनीमाथि आरोप पनि नलागेको होइन । तर उनको इमान्दारितामाथि शंका गर्ने ठाउँ नै थिएन । नेपाल र नेपालीलाई जुन ठाउँमा पु¥याउने सपना उनले बुनेका थिए, त्यसमा निरन्तर प्रतिबद्ध नै रहे ।
नेपालमा पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापना होस् र आर्थिक विकास होस् भन्ने उनको मुख्य चाहना थियो । उनी भन्थे ‘नेपालको गाउँ सुधार होस् ।’ बिपीको जन्मजयन्ती मनाइरहँदा उनले देखेका सपना पूरा गर्न यहाँका राजनीतिक दल कति प्रतिबद्ध रहे भन्ने विषयमाथि घोत्लिनुपर्ने भएको छ । बिपीको नाम जपेर र उनले व्यक्त गरेका विचार सुनाएर परिवर्तन सम्भव छैन ।
बिपीले नै स्थापना गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेस नै बिपीको विचारबाट विचलित भएको हो कि भन्ने महसुस भइरहेको छ । पुराना पुस्ताका नेताको भाषण नै बिपीको नाम लिएर सुरु हुन्छ । तर मुलकलाई समाजवादउन्मुख बनाउन रतिभर चासो दिएको पाइँदैन । उही परम्परागत शैलीका कार्यक्रम गरेर बिपी जयन्ती, बिपी स्मृति दिवस र मेलमिलाप दिवस मनाउने गरिएको छ । पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई उनको विचारबाट प्रशिक्षित गराउने अनि लक्ष्य प्राप्तिमा लाग्न प्रेरित गर्नुपर्ने बेला हो यो ।
अहिले कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ । यो बेला त सरकारका कमीकमजोरी औंल्याउँदै जनाधार सुदृढ बनाउनुपर्ने बेला हो । तर पार्टी आन्तरिक किचलोमा बेस्सरी मुछिएको छ । यसले पार्टीलाई त धरासायी बनाउँछ नै मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वमा पनि असर पार्छ । मुलुकको हितका लागि कांग्रेसजनहरु बिपीले भनेजस्तै १ मुठी माटो हातमा लिएर कसम खाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
आन्तरिक उडान सुरु, आज १३४ जना जहाजमा पोखरा आए
यौन दुर्व्यवहारः सजाय कार्यान्वयनमा बाधा किन ?
बङ्गलादेशबाट मल ल्याउन भारतले सहजीकरण गर्ने
जीप दुर्घटना हुँदा दुई बालकको मृत्यु
गण्डकी प्रदेश सरकारले गर्‍याे सुत्केरी बिरामीकाे उद्दार
हिमचितुवा आङ्रिता शेर्पाको निधन
म्याग्दीका बानियाँको किताबलाई यो वर्षको मदन पुरस्कार
सोमबार, २९ भदौ २०७७
महिलालाई अझै किन अन्याय ?
बालबालिका सम्वन्धी कानुन कार्यान्वयनका चुनौती
नेपाली विभागमा साहित्यको हेतुबारे छलफल
कोरोनाले भन्दा समाजले मार्ने डर
ढाडस दिऊँ, आत्महत्या रोकौं
बिहिबार, २५ भदौ २०७७